Turkiga oo Nigeria ka Dalbaday In la Xidho 17 Dugsi oo uu leeyahay Fetullah Gulen | Saxil News Network
Turkiga oo Nigeria ka Dalbaday In la Xidho 17 Dugsi oo uu leeyahay Fetullah Gulen
Xukuumadda Turkiga ayaa Nigeria ka codsatay inay xidhto tiro iskuullo oo ay sheegtay inuu leeyahay Fetullah Gulen oo dhawaan ay Dawladdu ku eedeysay in uu ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga.
Danjiraha Turkiga u fadhiya Dalka Nigeria Hakan Cakil, ayaa sheegay inuu codsaday in albaabada loo laabo 17-iskuul. Dawladda Turkiga ayaa iskuuladaas waxay ku tilmaantay inay kasoo baxaan lacago lagu maal-geliyo falal aan Sharciga Waafaqsanayn.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii Dawladda Somaliya ay xidhtay iskuullo iyo cisbitaallo ay lahaayeen Dhaqdhaqaaqa Sh. Fatullah Gulen, waxayna eriday dhamaan shaqaalihii hay’adda maamusha xaruman oo NILE lagu magacaabo.
Xukuummada Somaliland oo dalka Turkigu ka codsaday inay xidho dugsiga Nile Academy ayaa sheegtay inaanay Xidheyn Dugsigaasi ilaa lagu cadeyn inuu leeyahay Fathule Gullen
Fetullah Gulen ayaa iska fogeeyay inuu wax lug ah ku lahaa Maal-gelinta Inqilaabkii dhicisoobay ee bartamihii bishan ka dhacay dalka Turkiga, kaasoo la doonayay in xukunka looga tuuro Madaxweyne Erdogan.